Mpamatsy milina antsipirihany sy mpanamboatra masinina mpamokatra masinina
Kitapo manome lanja PP mandeha ho azy ...
Fanadiovana kofehy kofehy kofehy ...
Masinina mandeha ho azy Gusseting ...
Masinina mandeha ho azy Gusseting
Masinina fanaovana gusseting (toekarena ...
Roa maty mamono olona roa ...
Fanaraha-maso ny solosaina 6 loko BO ...
Masinina fanjairana kitapo Raschel
Loom boribory ho an'ny kitapo harato
Loom boribory (Shuttles 6)
Loom boribory (Shuttles 4)
Masinina miolakolaka Cam
PP manenona kitapo simenitra ...
Fanapahana mafana sy Cuttin mangatsiaka ...
Fanetezana mandeha ho azy & Ao ...
Fanapaka mandeha ho azy & Se ...
Manjaitra mandeha ho azy & Pri ...
Manjaitra mandeha ho azy & mafana ...
Fanetezana mandeha ho azy sy fanontana ...
Kitapo tenona PP manangona Ma ...
Mac fanontana manoloana sy miverina ...
Milina fanontana (1-4) Loko
Milina fanjairana kitapo PP Woven
Masinina manapaka kitapo harato
PP manenona kitapo fanapahana mangatsiaka ...
PP kitapo tenona mafana nanapaka M ...
Kitapo valizy ambany ambany PP ...
PP Woven Bags Masinina manapaka mafana
Masinina fanapahana mafana izy io amin'ny fanaovana kitapo misy tenona PP, mila tariby fanamafisana ny fanoherana mba hanapahana ireo horonan-taratasy PP.
Masinina fanapahana mangatsiaka kitapo PP
Masinina manapaka mangatsiaka amin'ny fanaovana kitapo misy tenona PP, mila antsy voatoto hanapahana ireo horonan-taratasy PP.
Ity milina fanapahana kitapo harato (fanapahana mafana) ity dia novokarina tamin'ny haitao mandroso maro, fampiharana-fitaovana mandeha ho azy, famahanana mandeha ho azy, fanapahana mafana ary fanisana mandeha ho azy sns.
Milina fanjairana kitapo pp io, manjaitra ny faritry ny lamba PP mba hamolavola kitapo. Ny haben'ny fampiharana azy: kitapo taratasy kraft, kitapo zezika, kitapo fanontam-pirinty, kitapo mitambatra, kitapo simika, kitapo lafarinina, kitapo vary, kitapo sakafo ary kitapo tenona hafa sns.
Fantatra amin'ny anarana hoe milina fanontam-pirinty flexo na kitapo harona fanontam-pirinty ho an'ny kitapo tenona PP, afaka manonta kitapo taratasy kraft, kitapo zezika, kitapo mitambatra, kitapo simika, kitapo lafarinina, kitapo vary, kitapo sakafo ary kitapo tenona hafa sns.
Masinina fanontana eo aloha sy aoriana
Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe milina fanontam-pirinty flexo na kitapo harona fanontam-pirinty ho an'ny kitapo tenona PP, izany no kitapo fanontam-pirintin'ny vokatra patanty eo aloha sy miverina indray mandeha, roa tonta miaraka. Izy io dia afaka manonta kitapo taratasy kraft, kitapo zezika, kitapo mifangaro, kitapo simika, kitapo lafarinina, kitapo vary ary kitapo sakafo sns.
Masinina manangona kitapo PP Woven
Izy io dia masinina mpanampy milina fanontam-pirinty kitapo PP, azo ampiasaina amin'ny fanangonana kitapo aorian'ny fanontana. Izy io dia misy ampahany roa, manangona ampahany ary manangona ampahany.
Bags packer dia vokatra mifanentana amin'ny masinin-kitapo tenona an'ny orinasanay. Natao manokana ho an'ny haingam-pandeha fanangonana tanana amin'ny tsena anatiny sy any ivelany.
PP Woven Bags Masinina famehezana ultrasonic
Ny milina fanamafisam-peo ultrasonika dia vokatra mifanentana amin'ny masinin-kitapo misy tenin'orinasa anay. Mety amin'ny 35% atin'ny lamba nilona vita amin'ny voajanahary voajanahary, lamba vita amina, lamba tsy tenona, TC, TR, PP, PU, ​​PVC, PE + aluminium, PE + taratasy, famafazana landihazo adhesive ary faritra manify thermoplastic sns.
Milina manapaka sy manjaitra mandeha ho azy
Kitapo fanenomana kitapo PP, fanapahana ary zaitra. Masinina mifangaro mitambatra milina fanapahana sy milina fanjairana. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa.
Milina manapaka sy milina fanontam-pirinty
Kitapo fanaovana kitapo PP Woven, milina ary manonta. Izy io dia milina fampifangaroana milina fanapahana sy milina fanontana. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa.
Fanetezana mandeha ho azy & zaitra ary milina fampidirana mafana miempo
Kitapo vita tenona PP manao milina, manapaka, manjaitra ary miempo mafana. Masinina mitambatra mitambatra milina fanapahana, milina fanjairana ary milina mafana. Mitsitsy ny asa ary mahatonga ny kitapo hamokatra mora kokoa. Mety amin'ny kitapo fanontana BOPP, kitapo sarimihetsika perla ary kitapo vita amin'ny plastika taratasy sns.